Delta Air Lines: Dhammaan shaqaalaha aan la tallaalin waxaa laga qaadi doonaa $ 200 dheeraad ah caymiska caafimaadka bil kasta
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Delta Air Lines: Dhammaan shaqaalaha aan la tallaalin waxaa laga qaadi doonaa $ 200 dheeraad ah caymiska caafimaadka bil kasta
Madaxa shirkadda Delta Air Lines Ed Bastian
Toddobaadyadii la soo dhaafay tan iyo markii uu soo ifbaxay kala duwanaanshaha B.1.617.2, dhammaan shaqaalaha Delta ee cusbitaalka la dhigay COVID si buuxda looma tallaalin.
Delta si ay shaqaalaha dheeraadka ah ee aan la tallaalin lacag dheeraad ah uga qaadato dheefaha caafimaadka.
Siyaasadda cusub ee caymiska caafimaadka ee Delta waxay bilaabmaysaa 1da Noofembar.
Celceliska joogitaanka isbitaalka ee COVID-19 wuxuu ku kacay Delta $ 50,000 qofkiiba.
Delta Air Lines ayaa maanta ku dhawaaqday in dhammaan shaqaalaha diyaaradda ee aan si buuxda looga tallaalin COVID-19 ay bixin doonaan $ 200 dheeraad ah bishii caymiska caafimaadka.
Qoraalka madaxa shirkadda Delta Air Lines ee shaqaalaha ayaa lagu yiri “dheeraadka dheeraadka ah ayaa lagama maarmaan noqon doona si wax looga qabto halista maaliyadeed ee go’aanka ah inaan la tallaalin u abuuraya shirkadeena.”
Sida laga soo xigtay Madaxa fulinta Delta Ed Bastian .
Inkasta oo 75% Delta Air Lines shaqaalaha ayaa laga tallaalaa fayraska, Bastian wuxuu ku dooday in “gardarrada” ee kala duwanaanshaha Delta ee COVID-19 “ay ka dhigan tahay inaan u baahan nahay inaan helno dad badan oo dadkeenna ah oo la tallaalo, iyo sida ugu dhow 100 boqolkiiba intii suurtogal ah.”
Isbeddelada ayaa dhaqangalaya laga bilaabo Noofembar 1, halka, laga bilaabo Sebtember 12, shaqaalaha aan la tallaalin sidoo kale waa inay qaataan tijaabooyin COVID-19 toddobaadle ah. Shaqaalaha aan la tallaalin waa inay sidoo kale xirtaan maaskaro wejiga gudaha.
Falcelinta dadweynaha iyo warshadaha ee go'aanka diyaaradda ayaa isku dhafan. Qaarkood waxay ammaaneen go'aanka Delta, iyagoo leh waa hab "habboon" oo lagu dhiirrigeliyo tallaalka waxayna samayn kartaa "isbeddel dhab ah."
Qaar kale, si kastaba ha ahaatee, waxay ka digayaan inay horseedi karto tusaale xun oo sheeganaya in go'aanka uu ugu dambayn ku salaysnaa damac dhaqaale, oo aan dan ka lahayn dadweynaha.
Duulimaadyada kale, oo ay ku jiraan United Airlines, Air Canada iyo Qantas ee Australia, ayaa qasab ka dhigaya tallaalka COVID-19 shaqaalaha.
Horraantii bishaan, madaxa United Scott Kirby iyo Madaxweyne Brett Hart ayaa shaqaalaha u sheegay in, in kasta oo ay og yihiin in shaqaalaha qaar aysan ku raacsanayn go'aanka, "qof walba wuu badbaado marka qof walba la tallaalo."